चिकित्साशिक्षा आयोगका उपाध्यक्ष डा. गिरीले २० करोड घुस मागेको दुर्गा प्रसाईंको आरोप - Health Today Nepal
चिकित्साशिक्षा आयोगका उपाध्यक्ष डा. गिरीले २० करोड घुस मागेको दुर्गा प्रसाईंको आरोप
काठमाडौं, २३ पुस: सम्बन्धनको पर्खाइमा रहेको झापास्थित प्रस्तावित बी एन्ड सी मेडिकल कलेजका प्रमुख सञ्चालक दुर्गा प्रसाईंले मेडिकल कलेजको सम्बन्धन दिने सर्तमा चिकित्साशिक्षा आयोगका उपाध्यक्ष डा। श्रीकृष्ण गिरीले आफूलाई होटेलमा बोलाएर २० करोड घुस मागेको आरोप लगाएका छन । राजधानीमा पत्रकारसम्मेलन गर्दै प्रसाईले आफूलाई उपाध्यक्ष बनाउने पूर्व माओवादीका नेताहरु गिरिराजमणी पोखरेल र नारायणकाजी श्रेष्ठलाई दिनु पर्ने भएकाले उक्त रकम दिए मात्र सम्बन्धन दिन सकिने डा. गिरीले बताएको आरोप लगाएका हुन ।
यही मंसिर १५ गते आयोगमा मेडिकल कलेज सम्बन्धनको लागि आफू निवेदन दिन जाँदा डा. गिरीले निवेदन लिन अस्वीकार गरी त्यही दिन साझ गौशालास्थित द्वारिका होटलमा बोलाएर २० करोड घुस मागेको दावी प्रसाईको छ । आफूले यति ठूलो रकम दिन नसक्ने बताएपछि डा. गिरीले १० प्रतिशत सेयर झापामा रहेका आफ्नो आफन्तको नाममा नामसारी गरिदिए पनि सम्बन्धन पाउन सकिने बिकल्प दिएको प्रसाईले बताए । २० करोड वा १० प्रतिसत सेयर नदिए सम्बन्धन दिन नसक्ने डा. गिरीले बताए पछि कुरा नमिलेको प्रसाईको भनाई छ । पैसा दिन नसके आफ्नो सम्धीको नाममा मेडिकल कलेजको १० प्रतिशत सेयर नामसारी गरिदिन डा। गिरीले भनेको प्रसाईंले बताए । ‘गिरीले सम्धीको नाममा सेयर पास गरिदिए मात्र सम्बन्धन दिन्छु भने,’ प्रसाईंले भने ।
यस बिषयमा आफूले प्रचण्डलाई पनि जानकारी गराएको तर सम्बन्धनका बिषयमा कुरै अगाडि नबढेको उनले जानकारी दिए । चिकित्सा आयोगले मापदण्ड नबनाई चोरबाटोबाट पैसाको चलखेलका आधारमा सिटिइभिटीअन्तर्गत नर्सिड कलेजहरुको सम्बन्धन बाँडेको तर आफूलाई सम्बन्धन नदिएको भन्दै प्रसाईले दुःख व्यक्त गरे । केपी ओली नेतृत्वको सरकारले चिकित्सा शिक्षा बिधयेक पास गर्दा उपत्यका बाहिर मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन पाइने व्यवस्था आफ्नै मेडिकल कलेजका लागि गरेको भए पनि डा. गिरीले मोटो रकम घुस मागेपछि आफू अलमलमा परेको प्रसाईको दुखेसो छ । बि एण्ड सी लगायतका व्यापारमुखी मेडिकल कलेजहरुलाई सम्बन्धन दिनु नहुने भन्दै डा. गोविन्द केसी पटक पटक अनसन बसेका थिए । पछिल्ला वर्ष प्रसाईले प्रधानमन्त्री ओली र प्रचण्डसंग हिमचिम बढाए पछि चिकित्सा शिक्षा बिधयेकमा यो कुरा समावेश गरिएको थियो । घुस मागेको बिषय डा. गिरीले भने अस्विकार गरेका छन् । कुनै प्रमाण विना आफूलाई बदनाम गर्न घुस मागेको आरोप लगाएको डा. गिरीको जिकिर छ । डा. गिरीले घुस मागेको प्रमाण देखाउन प्रसाईलाई चुनौति दिएका छन ।
Previous article चितवन एभरेष्ट हस्पिटल र ज्योति लाईफ इन्स्योरेन्स बिच सम्झौता
Next article बाफलमा खुल्यो साहारा स्किन क्लिनिक